IWebhu Yomnyama iyakwenza ngokuqinisekileyo izitalathisi ezikhuselekileyo
Udliwano-ndlebe noJoe Nedelec noBill Mackey weYunivesithi yaseCincinnati
UNjingalwazi uJoe Nedelec kunye nomfundi wezobugqwetha, uBill Mackey uphando nge-Web Web Dark njengoyi-cybercrime. Umsebenzi wabo kwiYunivesithi yaseCincinnati yinto entsha, kwaye ibuza imibuzo enomdla malunga nendlela ingqondo yomthetho ophucuka ngayo.
About.com uxoxwa noJoe noBill malunga neWebhu yeWebhu . Udliwano-ndlebe lwangaphantsi.
IWebhu Yomnyama ingabikho Ngenjongo yokukhokela kwiiNdawo eziKhuselekileyo
Ubumnyama obumnyama bunokubangela ukuba kubekho ulwaphulaphulo olungaphantsi kwesitalato I-KTS Design / Getty
About.com: UNjingalwazi uNedelec: Ziziphi iingcamango zakho kwiWebhu yeWebhu kunye ne-intanethi ye-intanethi kuba negalelo ekunciphiseni ulwaphulo-mthetho lomzimba kuluntu?
UProfesa Nedelec: IWebhu yeWebhu iyinto ekhangayo kwi-intanethi; inikezela ngokungachazwanga ngendlela engafani naleyo ngewebhu 'rhoqo' okanye 'indawo' yomhlaba - nokuba imali eqeshwe ngabo baqhuba ishishini kwiWebhu Yobumnyama ayinakwenzeka. Ngenxa yoko, kukho ukuziphatha okungahambi kakuhle kwi-intanethi eyenzeka kwi-Web Web Dark (okanye ngokuthe ngqo, umnatha omnyama) kuquka ukuthengisa nokuthenga izinto ezingekho mthethweni njengezonyango ezingekho mthethweni. Ukubonelela ngesicwangciso sokusetyenziswa kweziyobisi ngokuqinisekileyo kuyimpawu engafanelekiyo yeWebhu yeWebhu; nangona kunjalo, umbhali wam umbhali uBill Mackey (umfundi ophumelele apha apha e-UC) kwaye ndizibuze ukuba iirhwebo eziqhutyelwa kwi- Web Web Dark ezakhokelela kwindlela ekhuselekileyo yokuqhuba loo shishini. Kwizitrato, kukho iindlela ezininzi zokubambisa iziyobisi zingashukunyiswa ngokukhawuleza (cinga i-Scarface). Kodwa ama-intsebenziswano agqityiweyo kwi-intanethi akwenziwa ngumbhalisi oqinisekisa ukuba umthengi ufumana umkhiqizo wabo kwaye umthengisi ufumana inkokhelo yabo. Ukongeza, umlamli (ngokuqhelekileyo isiteji yendlela yesigqeba) uvumela impendulo yomsebenzisi olawulwayo abathengi abazayo kunye nabathengisi - cinga i-Amazon.com, kodwa kwimveliso engekho mthethweni. Ukongeza, umthengi kunye nomthengisi abazi ukuba ngubani omnye kwaye ngoko ke (cishe akukho nto ifunyenwe ngayo) ayikwazi ukubulala okanye ukuhlaselwa kwenzeka ngexesha lokuthengiselana. Ngaloo ndlela, uBill kunye ndicinga ukuba iingxaki zeziyobisi ezigqityiweyo kwi-Intanethi ye-Dark Web zingabangela ukunyanzelisa ubundlobongela obunxulumene ne-intanethi yezobisi. Oku kunokwenziwa kwezinye izinto ezingekho mthethweni ezifana nezixhobo, iziqhumane, okanye izinto ezingekho mthethweni. Kule ngongoma, yinto nje into yokuba uBill kunye nam sele sixoxile kwaye asiyiyo ingxaki yokuvavanya. Kodwa, sicinga ukuba i-logic isandi.
IWebhu Yobumnyama Ayiyi Kukhokelela KwiCollar White Crime?
IWebhu yeWebhu ayiyi kukhokelela kwi-crime collar. Umthombo wesithombe / i-Getty
About.com: Ngaba iWebhu Yobumnyama ayinakunyusa inani lamakhadi ekwerethi ebiwe kunye nolunye ulwaphulaphulo lomhlophe?
UProf. Nedelec: Kunzima ukuphendula lo mbuzo njengokuba isiseko salo mkhuba singaziwa. Kwi-criminology, kukho imbonakalo ebizwa ngokuba yi "Dark Figure of Crime" (ayinalo ubudlelwane nomnyulo wesigxina seWebhu ebumnyama), eyayiqala ukuba yi-Adolphe Quetelet kuma-1800. Eyona nto ibhekiselele kubo bonke ulwaphulo-mthetho olwenzekayo olungabonakaliyo okanye olungabonakaliyo. I-Criminologists iyaqaphela ukuba iintlobo ezithile zolwaphulo-mthetho ziyakwazi ukuxelwa kunye / okanye ukufunyanwa kunabanye (umz. Abaphengululi befunda ulwaphulo-mthetho lwe-white collar baye baqonda ukuba ixesha elimnyama lolwaphulo-mthetho lomhlophe lukhulu, ngakumbi lifaniswa nobugebengu besitalato. Ngoko, kunzima ukusho ukuba iWebhu ebumnyama iyakuchaphazela ulwaphulo-mthetho olumhlophe ngolo hlobo. Ukuba ndicinga ukuba kunjalo, andicinga ukuba iWebhu yeNgcali iya kubangela ukwanda kwenani lamakhadi-mboleko okanye eyezinye iintambo zobugebengu bamhlophe ngenxa yezizathu ezimbalwa. Okokuqala, iWebhu yeWebhu isalokhu igxininisa kulabo baqhelana nokuhamba ngaphaya kwewebhu (ngamanye amazwi, kukho inkqubo yokhetho ebeka umda wokufakwa kwesigaba senxalenye yolwaphulo-mthetho). Nangona kunjalo, iingcali zezokhuseleko zedijithali ziye zaphawula ukuba - kwinqanaba elingakulandelwayo - ukuhamba kwindlela ye-Web Web Dark (umz., Ukusetyenziswa kweTor) kuye kwanda kakhulu kwiminyaka emihlanu edlulileyo. Ngenene umntu unokucinga ukuba inxalenye yolu hlobo longeza ngenxa yokuhanjiswa kwenani elikhulu lamakhadi-mboleko kunye nolwazi lomntu olufunyenwe kwiimpazamo ezininzi zeenkcukacha ezenzeke ngexesha elifanayo. Okwesibini, kukho kwakhona iiwebhusayithi 'zomhlaba' ezikhethiweyo zeakhadi ezithiweyo. Ezi zingosi zihamba kakuhle, zihlala zitshintsha indawo zendawo kwindawo yokukhusela ukusetyenziswa komthetho (oku kungenjalo akudingi ukunyakaza komzimba). Kwinqanaba lam elidlulileyo, uBill kunye ndicinga ukuba ezi ndawo zifikeleleka kalula njengeemarike kwabangenalo ulwazi lokuhamba ngewebhu ebumnyama, kodwa ngokuzikhethela ukufuna amathuba okulwa nobugebengu kwi-intanethi. Ukuze uhambe ngaphaya komxholo, kunjalo, kukho imfuneko yokwanda kwindleko yophando kule ndawo. Ngoko uBill kunye nam, sinethemba lokusuka kwindawo encinane kwinani elibuhlungu lobugebengu kwi-intanethi.
Unjani Omnye Uphando lweWebhu Yobumnyama kunye noBulungu Bakhe obungavumelekanga?
Uphanda njani iWebhu yeWebhu? Dazeley / Gety
About.com: Ucwangcisa njani ukuthetha lolu hlobo lophando? Ngaba oku kwenziwe ngaphambili?
UProfesa Nedelec: UBhili kunye nam sele sixoxe ngeendlela ezimbalwa zokufumana uphando ngeengcamango zethu. Kunjengeyokuqhuba uphando olwenziwe ngaphandle kwezahlulo okanye ulwaphulo-mthetho, abantu ababandakanyeka ekuziphatheni okungaqhelekanga abaqhelekanga ukuthetha nabanye ngako. Abantu abasebenzisa i- Web Web Dark to engage in behavior behaves are doing exactly because of the unknown. Nangona kunjalo, into ebalulekileyo malunga nokuqhuba uphando lomsebenzi we-intanethi kukuba kukho iirekhodi-zohlobo oluthile okanye olunye-olufumanekayo kulabo baziyo ukuba bajonge. Ngoko siyakwazi ukufunda iinkalo ezithile ze-Web Web Dark, ngokubhekiselele kwi-criminology, ngendlela efanayo nabaphandi bafunda amaphephandaba, i-Twitter, okanye i-Facebook (umzekelo, ukuhlaziywa komxholo). Siye saqwalasela nokuqhagamshelana nabasebenzisi abasebenzisayo abamnyama ukufumana ukucinga kwabo kwi-intanethi ye-intanethi, umzekelo, ngaphambi nangemva kokubandakanyeka kwabo kwiWebhu Yomnyama kodwa kusenokwenzeka ukuba baqwalasele uluhlu olubanzi lweemingeni zomsebenzi.
Kwolwazi lwethu, akukho uphando oluye lwasebenzisa uhlalutyo lobugebengu kwiWebhu Yomnyama ngendlela esicinga ngayo. Uninzi lwaphando kulo mmandla ukuya kutsho lujolise kwiintlobo zemisebenzi efumaneka kwi-intanethi kwaye kungabikho okunxulumene nale mi sebenzi kwiinkalo zentlalo engaxhunyiwe kwi-intanethi. I-intanethi ibhekwa njengento ehlukileyo ngokupheleleyo ekhutshwe kwilizwe elingenasistim, elithile ngokwenene liyinyaniso. Nangona kunjalo, kukho ubudlelwane obuhle phakathi kwehlabathi ezimbini ezidala indawo enotyekelo yophando esilindele ukuyihlola.
I-Web Dark Dark Here?
Ngaba IWebhu Yomnyama Kuzo kuhlala? Dazeley / Getty
About.com: Ucinga ukuba iWebhu yeWebhu ilapha ukuhlala? Okanye ngaba iya kutshintsha nje kwezinye iifom ngexesha?
UProfesa Nedelec: I- Web Dark kunye nayo yonke idijithi yayo yobumnyama (ukusuka kwi-Tor Project ukuya kwiSilik Road kunye nojule) yinto ebalulekileyo. Okuthakazelisayo, okokuqala kwakhiwa nguRhulumente (zombini ibhanti yophando lwamanxweme kunye nesebe lezokukhusela) ukwenzela ukuba ukugcinwa kwangasese kunye nokudluliselwa kweengcaphephe zempi. Ekugqibeleni, yenziwe ngumthombo ovulekileyo, kunye nomxholo wamhla wamanqaku kunye nezixhobo zokuhamba ngeendlela (ezifana nesiphequluli seTol) zenze ukuba kube luluntu namhlanje. Ndiyicinezelekile ukuba ndicinge nge-analogue engaxhunyiwe kwi-intanethi ukuba ngakwesinye icala ivumela izinto ezininzi ezinjengezinto ezingabonakaliyo zabangcweli bemimoya okanye abantu abazitshutshisayo kwezopolitiko ukuze balwe namalungelo oluntu - njengaseMiddle East kunye neChina - nangakolunye uhlangothi inikezela isicwangciso sehlabathi sokusabalalisa iinthombe zoonografi kunye nezinto ezingekho mthethweni, ukuthengiswa kweenkonzo zentsha-yeshishini, kunye neminye imiba eminye yemeko yomntu.
Abamkeli bokuqala beWebhu ebomnyama babijonga njengento yokugqibela yobuncwane bokwenene kwilizwe lethu elibhekiselele kwihlabathi-kwaye loo nto ayizange ishintshe. Ngoko kukho inkuthazo eqinileyo yokugcina ezo zakhono zobungasese. Ngokufanayo, njengoko oorhulumente kunye nee-arhente zokunyanzeliswa komthetho bazama ukufumana iindlela zokuphula ikhuselo lokungaziwa kwi-Web Web Dark, kubonakala ukuba abo bafuna ukuhlala befihliweyo baya kuphuhlisa ezinye iindlela zokwenza njalo. Kunjengezinye iinkalo ze-cybercrime, kukho uhlanga lwezandla zobuchwepheshe phakathi kwabo bahlanganyela ekufumaneni kunye nalabo ababandakanya ukufihla. Kuze kube ngoku, iWebhu yeWebhu ibonakalise indawo efihlakeleyo.
Ndingayifumana njani kwiWebhu Yomnyama?
UProfesa Joe Nedelec kwi-U kaC. Joe Nedelec
Nangona i-About.com ingavumi ukuthengwa nokuthengiswa kwe-contraband, sisekela inkululeko yoluntu yentando yesininzi kunye ne-intanethi.
Ukufikelela kwinethiwekhi ye-OTI inethiwekhi, kukho isifundo se-browser kwisithuba sekhompyutha.
Ukufumana iiwebhusayithi ezahlukeneyo kunye neenkonzo kwiWebhu yeWebhu, kufuneka uzenzele kwaye wenze uphando. Nazi izihloko ezi-3 eziza kukunceda ukuba uqalise ukufumana iinkonzo ze-Dark Web.
Ukuba ungathanda ukudibanisa uprofesa uJoe Nedelec, unokufikelela kuye ngephepha lakhe lewebhu kwi-U yeCincinnati.
Izicwangciso zobungasese be-Facebook Wall
Indlela yokwenza uhlaziyo lweMveliso yeNkohliso ye-Intanethi
Ukudala iPhasiwedi ephephile
Ndiye ndatshutshiswa! Ngoku kuthweni?
Ziziphi izinto zokuHluma neEmail ezibukekayo
Indlela yokukhubaza i-DHCP kunye nokusetyenziswa kweeNdilesi ze-IP zeStatic
Izinto Ezilishumi Abazali Abazenza Ngoku Ngoku Ukugcina Abantwana Bakhuselekile kwi-Intanethi
Indlela yokubeka iliso kunye nokukhusela i-Reputation yakho ye-Intanethi
Indlela yokukhusela iiKhamera zeKhuseleko ze-IP
Ukuphakama & Ukuwa: Impucuko YezoMfazwe - Ukukhishwa kweMidlalo ye-PC yamahhala
UkuSifumana kwe-Intrusion Detection (IDS) kunye ne-Prevention (IPS)
Funda indlela yokuchonga nokuvula ifayile ye-AC3
Indlela yokusebenzisa i-Android File Manager
Indlela yokulungisa i-Dwmapi.dll Ayifumananga okanye Ayiphutheli Iimpazamo
I-Pokemon Diamond Action Replay Iikhowudi zeNintendo DS
Indlela yokusebenzisa i-Ubuntu Iphasiwedi yoMphathi
Ngaba i-My MP3 Player isebenza ngeTunes iTunes Store?
Indlela yokuvumelanisa iKhalenda yeGoogle neKhalenda ye-iPhone
I-HWiNFO v5.82 Ukuphononongwa (iNkqubo yeNkqubo yeeFree Free)
Nika amandla i-WEP okanye i-WPA Encryption ukukhusela iWindows Wireless Network
7 Iifayile ze-Windows Password Recovery Tools
Iimpawu eziphezulu ze-Movie neVidiyo ze-Smart Phones
Indlela yokulungisa kwakhona ii-Wii / Wii U Icons kwaye Yakha ii-Wii U Folders
Khuphela i-Super Mario Bros Clone ye-PC
Indlela yokusebenzisa i-Twitterfeed ukuzenzekelayo I-RSS Feed Postings
I-Wii Fit U - Uhlaziyo lweMidlalo
Indlela yokukhetha ukuLungiselelwa kweSiboniso seBlog
Tshintsha i-Font Default kwi-PowerPoint Text Box
Indlela yokujonga Iibhokisi ezingenayo Ibhokisi lemiyalezo Bala kwi-Outlook
Ukusebenzisa i-Smart Playlisti zoLondolozo lweZiko lokuThuthukisa i-iPhone Storage
Ukusetha iWindows Live Mail Ukukhumbula Iphasiwedi yakho